Umuntu oneminyaka engu-16 uzohamba e-Arctic eyobhalisa izinja zaseGreenland | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - BuhoMag
Uneminyaka engu-16 kuphela, kodwa UManuel Calvo Ariza uzowela i-Arctic ngesizathu esihle: ukubala izinja zaseGreenland, izilwane ezinhle, ezihlangene nezakhamizi zakule ndawo, ezibona ukuthi zishintsha kanjani izimo endaweni abahlala kuyo njalo.
Kanye noyise, UManuel uzohamba amakhilomitha angama-400 ngo -20ºC aze afike eQannaq, enye yezindawo ezikude kakhulu emhlabeni.
Inselelo ye-Arctic, igama elinikezwe ohambweni, ihlose ukuqwashisa ngokuguquka kwesimo sezulu ngakolunye uhlangothi, nangobunikazi obubhekelekayo, umlando namasiko enja yaseGreenland ngakolunye uhlangothi. Njengoba izinga lokushisa likhuphuka neqhwa liyancibilika, abantu abaningi ngokwengeziwe banquma ukushiya isifunda lapho bazalelwa khona bayofuna ezinye izindawo eziphephile. Ngokwenza njalo, bashiya izinja lapho. Futhi manje kunezinja eziningi kunabantu.
Intsha eneminyaka engu-16, ethanda kakhulu futhi ivikela izinja, izohamba i-Arctic ukuzama ukuyisiza, ihlola inani le-canine yaseGreenland.
Umsebenzi wokugcina kaDesafío Ártico kuzoba ukuqoqa imininingwane yamanyuvesi aseMalaga naseBarcelona ukufunda lezi zinja ezinhle, futhi ubone ukuthi kukhona yini umehluko phakathi kwama-bacteria nezinye izinto eziphilayo zezinja ezihlanzekile uma kuqhathaniswa nalezo esizaziyo kwezinye izindawo lapho isimo sezulu sifudumele khona. Ngale datha, bazokwazi ukwazi ukuthi mangaki amathuba okufanele bavumelane nawo emhlabeni lapho kuneqhwa elincane nelincane.
Njengoba sibona, Akubona bodwa okufanele siphonsele inselelo ukuguquguquka kwesimo sezulu, kodwa futhi nezinye izilwane esezihlale nathi iminyaka eyi-10.000 XNUMX: izinja, okuthiwa zingabangane bethu abakhulu. Bahlale bekhona, kepha ingabe sinabo lapho besidinga?
Sethemba ukuthi lolu hambo luzosiza ekuqwashiseni abantu mayelana nokuthi kusho ukuthini ukuba nokunakekela inja, kanye nalokho esikwenzayo emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Intombazane eneminyaka engu-16 izohamba i-Arctic ibhalise izinja zaseGreenland
Ababaleki besimo sezulu bazobalwa ngezigidi ngonyaka we-2050